समकालीन समाजका केही कुरा ! - Fonij Korea
लेखक: नरध्वज तामाङ (क्षितिज) | प्रकाशीत मिति: July 28, 2021
हाम्रो बौद्धिक बिमर्श
बिकसित देशहरुमा नयाँ बिचार निर्माण, गम्भीर मन्थन र म्यासिभखाले बौद्धिक बिमर्श युनिभर्सिटीका कोठाबाटै शुरु हुन्छ । झन् गम्भिरखाले सामाजिक बहस र बिश्लेषण त हुने नै यसरी हो । तर हामीकहाँ यस्तोखाले सार्थक बहस र गम्भीर अनुसन्धान त्यति धेरै भएको पाइँदैन । हामीकहाँ समाजशास्त्रका युनिभर्सिटी लेभलका कितावमा भएका धेरै रिसर्चमा आधारित भनिने प्रा. डा. कै लेखहरु पनि हामीले इन्जोय गर्न नसक्ने टाइपका छन् । ती के नमिल्या के नमिल्या जस्तो लाग्नेखाले छन् । तरकारीमा नुन नपुगेजस्तो/मरमसला नपुगेजस्तो टाइपका छन् । यो कुरा समसामयिक बिषयमा चासो राख्ने हामीजस्ता धेरैजसोले सजिलै अनुभुत गर्न सक्छन् ।
हुन त युनिभर्सिटीका नाम चलेका विद्वानकै केहि अनुसन्धानमा पनि कपि पेस्ट भएको प्रमाण केहि समयअघि खुबै चर्चामा आएको थियो । यस्तै झुन्डले हाम्रो लामो ईतिहास रहेको विश्वविद्यालय बोकेर हिंडेका छन् । अनि हामीले स्तरीय नतिजाको आशा गरेर हुन्छ त ? यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि हामीमा परिश्रम गर्ने संस्कारको खडेरी परिसकेको छ । उपल्लो तहमै यस्तो छ भने विश्वविद्यालयका जुनियर प्राध्यापकहरुको हालत कस्तो होला ! यो कल्पनासम्म गर्न सकिने भो । बरु प्रा. डा. बाहेकका अन्य केही मेहनति लेखकले लेखेका लेखहरु पढ्नयोग्य भएनि उनीहरु पनि सम्बन्धित बिषयबस्तुमा धेरै ठाँउमा चुकेका छन् ।
दाेहाेर्याएर पढ्दा त्यस्तो महसुस हुँदोरहेछ । केही गल्ती भेट्नु ठुलो कुरो होइन । तर केही ठाँउमा साँच्चिकै चुकेको पनि भेटिन्छ । मेरो समुदाय बारेको केही अनुसन्धानमुलक लेखमा नै मैले त्यस्तो पाएँ । यो मेरो आफ्नो बुझाई हो । यो सत्य नहुन पनि सक्ला । मेरो बुझाईको सिमितताको कारण पनि मलाई यस्तो लागेको हुनसक्छ । अरुलाई यो भन्दा फरक लाग्न पनि सक्छ । त्यस्तो लाग्ने छुट पनि छ । किनकी लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा बहुल बिचारहरु हुन पाइन्छ । बहु दृस्टिकोण हुन सकिन्छ । हुनु पनि पर्छ । त्यो कुनै नौलो कुरो होइन । ठुलो कुरो पनि होइन । त्यसलाई स्विकार्नु चैं ठुलो कुरो हो । त्यो स्विकारोक्ती हामी धेरैमा पाइँदैन । यो ट्रेण्ड भत्किनुपर्छ । आफुकेन्द्रित बिश्लेषण पनि कहिलेकाहीँ घातक सिद्ध हुनसक्छ ।
हाम्रो राजनीतिक/बौद्धिक नेतृत्व
हाम्रो समाज नै अलि फरकखाले छ । यो बडो बिचित्रखाले नै छ । हामीमा सबै जनालाई आफैं जान्ने बुझ्ने छु भन्ने भ्रम छ । झन् नेतृत्व तहमा रहेकाहरुको त के कुरा गर्नु ! यो हाम्रो संस्कृतिकै रूपमा विकसित भएको छ । खासमा यो एक प्रकारको बिकृति हो । हाम्रा बौद्धिकबृत्त र राजनीतिक नेतृत्वमा भएका सबैजसोमा यस्तै खालको भ्रमको रोगले नराम्ररी गाँजेको छ ।
तर सत्य भने जहिल्यै अर्कै हुन्छ । संसारका सबै शक्तिशाली मान्छेहरु नहार्दासम्म आफु साँच्चिकै शक्तिशाली छु भन्ने महाभ्रममा हुन्छन् । किनकी कमजोर छ भन्ने उनीहरुले सुन्नै पाएका हुँदैनन् । यो कुरा उनीहरुको नजिककाले सुनाउने कुरै भएन । त्यसो हुँदा समाजका तितो सत्यहरु देख्न पाउँदैनन् । एकहिसाबले सहि सूचनाबाट बन्चित छन् । चाहे त्यो शासक होस् या कथित बौद्धिक भनिने जमातहरु । यसरी उनीहरु समाज बुझ्नबाट बन्चित भएका हुन्छन् । उनीहरुलाई सिमित घेराले घेरिरहेका हुन्छन् । त्यो घेराभन्दा बाहिरको समाज देख्नै पाएका हुँदैनन । उनीहरुको पतनको मुल कारण पनि त्यै बन्छ । आफैं बन्छ । आजसम्मको ईतिहासले त्यै बताउँछ । ऎतिहासिक नजिरले त्यै बताउँछ । खासमा भन्नुपर्दा ईतिहासभन्दा ठुलो गुरु कोहि हुन्न । यो ध्रुवसत्य कुरा हो । बाँकी कुरा हामी सबैको बुझ्ने ईन्द्रीयमा भरपर्ने कुरा न हो ।
बहसको लागि बहस त बेकार चिज हो । खासमा समाजमा भइरहेको चिज र हामीले गरिरहेको कुराको तादत्म्यता मिले पो बहसको पनि स्वाद आउनु ! मज्जा आउनु ! तरकारीमा चिनी मिसाएजस्तो कुरो त के स्वाद हुनु नि ! तर बिडम्बना धेरैजसो मान्छेहरु त्यसैमा रमाइरहेका हुन्छन् ।
पछिल्लो सामाजिक परिवर्तन
हाम्रो समाज बुझ्न अलि कठिन नै छ । झन् पछिल्लो केही दशकमा त समाज यति द्रुतगतिमा परिवर्तन भयो कि हामीले सोचेभन्दा धेरै स्पिडमा समाजको गति अगाडि बढीरहेको छ । समयको रफ्तारमा सँगसँगै कुद्नलाई अलि गाह्रै छ । कोसिससम्म गर्ने हो । तैपनि समय, समझ, जिम्मेवारी र विशेष परिस्थितिले गर्दा आफ्नो सर्कलभन्दा फरक सर्कलसँग पनि सङ्गत र भेटघाट गर्ने मौका जुर्दोरहेछ । यस्ता क्षणहरु गुमाउनु पनि हुँदैन । यसले फाइदा नै गर्छ । यसबाट हाम्रो पछिल्लो समकालीन समाज पढ्नका लागि थोरै भएनि सहयोग नै पुग्दोरहेछ । त्यसपछि लाग्यो – यो समाज हामीले सोचेभन्दा धेरै फरक छ । पौडी सिक्न पोखरीमै पस्नुपर्छ भनेझैं समाजका हाँङ्गाबिँङ्गा राम्रोसँग बुझ्नलाई/केलाउनलाई उनीहरुसँग घुलमिल त हुनैपर्ने हुन्छ । हाम्रा समाजका अवयबहरु बिबिध विशेषतायुक्त छन् । त्यसका लागि सबैतिर भिज्नु जरुरीजस्तै छ । तर हाम्रोमा अहिलेसम्म खासै यस्तो भैरहेको छैन ।
आजसम्म हामी यसैमा चुक्यौँ । धेरैलाई अझै यस्तो फील भएकै छैन । तर यो ख्याल गर्नैपर्ने र बुझ्नैपर्ने कुरो हो । पुरानो पुस्ता चुकिसक्यो । अबको पुस्ता पनि यहिँनेर चुक्ने प्रवल संभावना छ । हाम्रो सामाजिक अध्ययनको कमजोरी नै यै हो । अध्ययन र राजनीतिमा समाजलाई जोड्नै सकेनौं । अब फरक ढंगले अध्ययन मनन हुनु आवश्यक छ । टाउको दुखेको दबाई पेटमा लगाएजस्तो टाइपले त अब हुन्न । यसलाई करेक्सन नगरि सहि समाधान निकाल्न गाह्रो नै छ ।
केही मनोसामाजिक समस्या
पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा अनौठो एवं नौलो खालको विशेषता र सामाजिक संरचनाहरु बिकसित भएका छन् । यहाँ रोजगारी पर्याप्त छैन – तैपनि यहाँ कसैलाई फुर्सद छैन । मानिसहरु खासै ठुलो समस्यामा पनि देखिँदैन – तैपनि मनमा अमनचैन छैन । कसैले धेरै काम पनि गर्याछैन – तैपनि अनुहार शिथिल/थकित देखिन्छ । शारीरिक रुपमा स्वास्थ्य अवस्था ठिकै छ – तैपनि सबैजसोको हाउभाउ अस्वभाविक देखिन्छ । असन्तुष्ट छन् । बेथिती र भ्रष्टाचारको मात्रा दिन दुगुणा रात चौगुणा अग्लिँदो छ । जसरी हुन्छ पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन थामिनसक्नु भैसक्यो । यो तत्काल रोकिने अवस्था नै छैन । निरन्तर बढिरहेछ ।
लोभी र आपराधिक मानसिकता भएकाहरु व्यापकरूपमा बढीरहेको छ । यस्तै छ हाम्रो समकालीन समाजको असली अनुहार । आजको हाम्रो समाजको कटुचित्र । जे जसरी परिभाषित गर्न खोजे पनि यथार्थ चित्र यै हो । यहाँ धेरैखाले गडबडिहरु छन् । खासमा यो के को सङ्केत हो ! यो कतातिरको यात्रा हो त ! बहस अनि गम्भीर समिक्षा र खोजी हुनुपर्ने बिषय हो यो । तर यसतिर पर्याप्त छलफल र अनुसन्धान भएको पाईएन । ध्यान दिनैपर्नेहरुले समेत खासै ध्यान दिएको पाईएन । खासमा भन्नुपर्दा सबैजनाले आफुले गर्नैपर्ने काममा मनैदेखी ध्यान दिए धेरै कुरा आफैं मिल्दै जान्छन् ।
बुझ्नैपर्ने केही कुराहरू
नेपाललाई चिनाउने धेरै चिजहरु छन् । एउटा त हामी यो बुद्धको पबित्र भुमी हो भन्छौ । तर हामीलाई बुद्धबारे धेरै कुरा थाहा नै छैन । मलाई पनि धेर थाहा छैन । बुद्धको शिक्षा फलो गर्नु त झन् धेरै परको कुरा । यसबारे चासो र चिन्ता लिनेहरु पनि खासै देखिएका छैनन् । केहिले चासो लिए पनि त्यो सङ्ख्या एकदमै नगण्य हो । अर्को कुरा नेपाल हिमालै हिमालको देश हो भन्छौं । तर हाम्रा सुन्दर हिमालबारे हामी धेरैजना अनभिज्ञ नै छौँ । हामीलाई हिमाल भन्नेमात्र थाहा छ । यसबारे अरु धेरै थाहा नै छैन । बढीमा सगरमाथाको नाम थाहा छ । अरु के कुरा, नेपाल सरकारले आफैंले पहल गरेर आफ्नै खर्चमा सगरमाथाको उचाई नापेकै भर्खरै हो । हामीकहाँ हिमालबारे कुन, कस्तो, कहाँ, कसरी, किन भन्नेबारे पर्याप्त खोजी गर्ने र बुझ्ने चलन नै छैन ।
यसको महत्त्व र उपयोगीताबारे पर्याप्त छलफल भएकै छैन । विश्वका कुना – कुनामा रहेका बिदेशीबिच हाम्रा ठुला र सुन्दर हिमालबारे निकै चर्चा हुन्छ । हाम्रा धेरै हिमालबारे उनीहरुलाई धेरै राम्रो जानकारी पनि छ । तर हामी आफैं चैं यसबारे अनभिज्ञ जस्तै छौँ । खोजी हुन बाँकी हिमालको त झन् के कुरा गर्नु ! लाग्छ – हामी सुनको कार्पेटमा सुतेर सुनकै खोजी गरिरहेका छौँ । यो त हरिणले आफ्नो बास्नाको खोजीमा कोषौँ टाढा कुदेजस्तो भएन र ! यो अहिलेका हामी र भोलिको आउने पुस्ताको लागि पनि बिडम्वनाको कुरा हो । यसतर्फ बेलैमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनैपर्ने देखिएको छ ।
हाम्रो पुरातन चिन्तन
अर्को कुरा हामीमा आफुभन्दा पछिका पुस्ताको अस्तित्व र क्षमतालाई कदर गर्ने संस्कार नै छैन । प्रोत्साहन गर्ने चलन नै छैन । हामीले युवापुस्ता भोलिका खम्बामात्रै भन्छौं । खासमा युवा भनेका आजका सहयात्री हुनुपर्छ । अनिमात्र भोलिको नेतृत्व जन्मिन्छ । नेतृत्वको लागि तयारी गर्दै जान सकिन्छ । उनीहरुलाई जहिल्यै कमजोर आँक्ने हाम्रो चलन छ ।
यो मेरो थोरै भोगाइको कुरा पनि हो । नयाँले नेतृत्वको लागि दाबी गर्दा जहिले पनि समय पुगेको छैन भन्छन् । अनुभव पुगेको छैन भन्छन् । अझै पर्खिनु भन्छन् । तर पाँच बर्षको समय यो पुस्ताको लागि धेरै लामो समय हो । उनिहरु त्यति धेरै समय कुर्न सक्दैनन् । यो अवधिमा धेरै कुरा परिवर्तन भैसक्छन् । जोस, जाँगर र उत्साह मर्न पनि सक्छ । मनोबैज्ञानिक रुपमा अघि बढिसकेको मान्छे फेरि पाँचबर्ष पछाडी फर्किने टाइपको कुरामा म चैँ कन्भिन्स हुन सक्दिँन । अहिलेको समय नै स्मार्ट भैसकेको छ । हरेक कुरा तिब्रगतिमा बिकसित हुन्छ तर सबै कुरामा जेन्युइननेस पहिलो सर्त चैं हुनैपर्छ । यदि यसो भएन भने आखिर हुने दुर्घटना नै हो ।
हामी भने उही नब्बेको दशकको पुरातन चिन्तनमै रुमल्लिएरहेका छौँ । नेतृत्वमा दुरदर्शिता नभएर पनि हो । सक्षमलाई उमेर र अनुभवको तारबारले छेक्नु सहि कदम होइन । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । कहिलेकाहीँ त अचम्म लाग्छ – वडाको पनि सदस्य बराबरको राजनीतिक स्ट्राटेजी नभएकाहरु पनि राष्ट्रिय राजनितिमा हाबी भएको रहेछ कुनै दिन । लाग्छ कस्ता कस्ता मान्छेद्वारा शासित जनता भएछौँ ।
नेतालाई मात्रै भन्ने ठाँउ छैन । हामी पनि गतिला नभएर यो सबै भएको हो । हामीले पनि बेलामौकामा आफ्नो बिबेक प्रयोग गर्न चुक्नुहुन्न । नेतालाई त के गाली गर्नु र ! अब पनि यो देशमा केही समय यहाँ यस्तै चलिरहने पक्का छ । सङ्केत राम्रो छैन । किनकी तुरुन्त नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना नै छैन । नेतृत्व त्यति सजिलै जन्मिने चिज पनि होइन । जन्मे पनि हाम्रोमा सहजै स्वीकार गर्ने चलन खासै छैन । त्यसरी जन्मेछ भने पनि टिक्न दिँदैनन् । किनकि टिक्यो भने अरु धेरैजना पछि परिन्छ भन्ने डर र भ्रम ब्याप्त छ । सक्षम नेतृत्व आउन नसक्नुको मुल कारणमध्ये यो पनि एक कारण हो । अब ग्राउन्डबाटै धेरै कुरा करेक्सन हुँदै आउनुपर्ने देखिन्छ ।